IPad Pro? Tsia, ilay MacBook vaovao | Vaovao IPhone
Volana maro miresaka momba ny iPad Pro izay afaka natombok'i Apple tamin'ity lohataona ity, ary niditra tao amin'ny Keynote i Apple ary namela antsika tsy hanana iPad Pro fa mitondra antsika MacBook ultrathin sy ultralight vaovao. Ny takelaka matihanina dia fanantenana lehibe izay hitan'ny maro ho an'ny iPad, amin'ny fotoana hafa dia mpivarotra lafo indrindra nefa ankehitriny mahita ny fidinan'ny varotra nefa tsy misy vahaolana. Fa angamba tsy dia misy dikany (androany) ny famoahana takelaka "pro", nefa misy dikany ihany ny fandefasana solosaina «iPad» karazana, miaraka amin'ny ny tombony azo amin'ny takelaka fa ny hery sy ny fahaizan'ny laptop. Raha mandinika ny antsipirian'ny iPad sy ny MacBook ianao dia ho gaga ianao mahita ny isan'ny lalao mifanelanelana amin'ireo fitaovana roa ireo.
3 Fahaleovan-tena mandritra ny tontolo andro
5 Trackpad amin'ny Force Touch
6 Rafitra fandidiana
7 Ny dingana voalohany mankany amin'ny fitaovana hybrid dia nalaina
Ny MacBook vaovao dia misy a Fampisehoana Retina 12-inch, miaraka amina vahaolana 2304 × 1440Raha ny iPad Air 2 dia manana efijery 9,7-inch miaraka amina vahaolana 2048 × 1536. Rehefa miresaka momba ny iPad Pro dia nolazaina foana fa tokony hanana efijery farafahakeliny 12 santimetatra raha te hanana izany fampiasana matihanina izany, ny haben'ny efijery nomen'i Apple ny MacBook ihany.
Fampifandraisana tokana ahafahana mampifandray ireo peripheral rehetra, eny, toy ny amin'ny iPad ihany. Apple dia manolo-tena amin'ny fifandraisana tsy misy tariby ho an'ny peripheraly, ary raha mila mampifandray zavatra tsy manana fifandraisana Bluetooth na WiFi ianao, dia eo no manana ny mpampitohy USB-C izay mila mampifandray adaptatera ianao hahafahana mampifandray azy, toy ny amin'ny iPad. Ilay mpampitohy mitovy amin'ny USB, output video, mpampitohy mpampita sns. mitovy tanteraka amin'ny iPad.
Ny fahitana ny atin'ny MacBook sy iPad Air 2 vaovao dia mitovy be. Apple dia nahavita nampihena ny singa anatiny ao amin'ny solosaina finday vaovao amin'ny fiteny farany ambany hipetrahana ny ambiny amin'ny toerana sisa tavela amin'ny bateria. Amin'ny ankapobeny dia mitovy amin'ilay nitranga tamin'ny iPad hatramin'ny nanombohany. Miaraka amin'ireo singa izay mitovy amin'ny an'ny iPhone, ny habaka lehibe indrindra dia nofenoina bateria izay nanome azy fahaleovan-tena izay tena tsara hatrany, iray amin'ireo tanjany lehibe raha oharina amin'ny solosaina finday, ka ny fahombiazany. Na izany aza, nahavita nanova an'io ny MacBook vaovao, miaraka amin'ny fahaleovan-tena hatramin'ny 9 ora, mihoatra ny ampy handao ny charger any an-trano ary hiasa tontolo andro amin'ny solosainao finday.
Ny teny hoe "matihanina" dia mifamatotra amin'ny klavie fizika Ny kitendry eo amin'ny efijery dia tsara raha ampiasaina indraindray, fa ny mitendry mandritra ny andro dia mitaky fitendry mahazatra mahazatra. Nahavita nampiditra tao amin'ny MacBook vaovao i Apple fitendry manify kokoa, feno miaraka amin'ny bokotra mbola lehibe kokoa, ary miaraka amin'ny teknolojia "lolo" vaovao izay mahatonga azy ireo haharitra kokoa.
Trackpad amin'ny Force Touch
Ny MacBook vaovao dia tsy manana efijery mikasika, izay mety ho lesoka lehibe indrindra raha ampitahaina amin'ny iPad Pro heverina. Na izany aza, nanome ny solosaina finday trackpad mora tohina amin'ny tsindry vaovao (Force Touch) izay afaka manao asa isan-karazany arakaraka ny tsindry hataontsika.
Betsaka amin'ireo izay nisalasala ny amin'ny fisian'ny iPad Pro no nanao izany satria nilaza izy ireo fa, anio, iOS dia tsy rindrambaiko mifanaraka amin'ny filan'ny tsena matihanina. Ny MacBook vaovao dia mitondra ny OS X, ny rafitra fiasa ho an'ny solosaina Apple, izay tsy misy isalasalana fa tonga lafatra noho io karazana sehatra io. Ny confluence an'ny iOS sy OS X dia mandroso amin'ny dingana kely, saingy tsy isalasalana fa ho zavatra izay hiafarantsika mahita na ho ela na ho haingana. Amin'ny volana Jona dia ho hitantsika ny OS X 10.11 vaovao sy ny iOS 9 vaovao, izay azo antoka fa handroso bebe kokoa amin'ity fampifangaroana eo amin'ireo rafitra ity.
Ny dingana voalohany mankany amin'ny fitaovana hybrid dia nalaina
Ny ho avin'ny solosaina finday sy ny takelaka dia mitoetra eo amin'ny fihaonan'ireo fitaovana roa ireo. Mpanamboatra maro no efa manao azy amin'ny fahombiazana bebe kokoa na latsaka, ary Apple, toy ny mahazatra dia manao azy miadana, saika tsy tsapany akory. Saingy toa tsy dia mampidi-doza loatra ny manome toky fa voamarika ny làlana, ary na dia mbola lavitra aza ny lalana dia hita ny fiafarany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » IPad Pro? Tsia, ilay MacBook vaovao
Ity ny fampiharana Fampiasa izay tonga ao amin'ny iOS 8.2
Apple Watch vs. Android Wear. Fomba fiasa Apple Watch 12 manokana